ရေခဲရေနှင့်အအေးသောက်လျှင် အူမကြီးကင်ဆာနှင့် အခြားရောဂါများဖြစ်နိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ရေခဲရေနှင့်အအေးသောက်လျှင် အူမကြီးကင်ဆာနှင့် အခြားရောဂါများဖြစ်နိုင်
ရေခဲရေနှင့်အအေးသောက်လျှင် အူမကြီးကင်ဆာနှင့် အခြားရောဂါများဖြစ်နိုင်
Posted by etone on Aug 31, 2010 in Health & Fitness |5comments
ထမင်းစားရင်း ရေခဲရေဖြစ်ဖြစ်အအေးဖြစ်ဖြစ် သောက်ပြီးစားရတဲ့အရသာဟာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစွဲနေတဲ့အလေ့အကျင့်တွေထဲက တစ်ခုလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုဒီအကျင့်ဟာ စိတ်ညစ်စရာရောဂါများကို သယ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း ပညာရှင်တွေက သတိပေးတားမြစ်ထားပါတယ်။ရေခဲရေကို ထမင်းစားရင်းသောက်ရင် ရေခဲရေရဲ့အအေးဓာတ်ကြောင့် အစာထဲက အဆီဓာတ်တွေကိုစုပြီးခဲသွားစေပါတယ်။ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်က မကောင်းတဲ့အဆီတွေကို စုပ်ယူရာမှာ တစ်လုံးတစ်ခဲနဲ့မို့ ထိထိရောက်ရောက်စုပ်ယူစေပါတယ်။အထူးသဖြင့် တိရိ စ္ဆာန်အသားတွေထဲက ပြည့်ဝအဆီတွေနဲ့ အခြားဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ ရေခဲရေကစုစည်းခဲပေးလိုက်လို့ အစာအိမ်၊အူမကြီးတို့နဲ့ ကြာကြာထိတွေ့ခွင့်ရပြီး ကင်ဆာများကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကတော့ရှေးပဝေသဏီကတည်းက အတည်ပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဒီလိုအဆီစုပ်ယူမှုကို ကောင်းမွန်စေတဲ့အတွက် သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့အဆီတွေ များပြားမြင့်တက်လာစေပြီး နှလုံးသွေးကြောပိတ်ရင်ဘတ်အောင့်ရောဂါ၊သွေးကြောတွေထိခိုက်တဲ့ရောဂါအစုံ၊လေဖြတ်ရောဂါအသည်းအဆီဖုံးရောဂါ၊အမျိုးသမီးတွေမှာဆို သားဥအိမ်ကင်ဆာ၊ရင်သားကင်ဆာ စသဖြင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေတော်တော်များပါတယ်။စားတဲ့အဆီအဆိမ့်တွေ၊တိရိစ္ဆာန်အဆီချင်းတူတာတောင် ပမာဏချင်းတူတာတောင် ရေခဲရေသောက်သူတွေမှာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏ ပိုမိုမြင့်တက်ကြောင်း စစ်ဆေးတိုင်းတာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
ရေခဲရေထက်ဆိုးတာက အအေးပါ။သူက ရေခဲရေရဲ့အထက်ပါ ဆိုးကျိုးတွေပါတဲ့အပြင် သကြားဓာတ်တွေပါတာမို့လို့ အစားအသောက်စားပြီးတဲ့အချိန်မို့လို့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်တက်ချင်းကို အရမ်းမြင့်တက်စေပါတယ်။အချိန်ကြာလာရင်ဆီးချိုဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ။ဆီးချိုဖြစ်ရင်လဲ ကျန်တဲ့ရောဂါပေါင်းစုံနောက်ဆက်တွဲဝင်လာမှာမို့ တကယ်ကြောက်စရာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘာမဟုတ်တဲ့အစားအသောက်အနေအထိုင်လေးတစ်ခုကြောင့် ရောဂါတွေထူပြီး ဘ၀မှာစိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင် မတန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ဖွယ်တင်ပြလိုက်ရတာပါ။
အင်း……..။ဒီစာသားလေးကို အခုမှကျွန်တော် ဒီ Website ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့တော့ ထင်တာပဲဗျ။ကျွန်တော့မေးလ်ထဲမှာ ဒီစာလေးရောက်နေတာ တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။ကျွန်တော် တင်ပြရင် ကောင်းမလား၊မတင်ပြရင် ကောင်းမလို့စဉ်းစားနေတုန်း ဒါလေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ ရဲ့ ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာကလည်း သိလျက်နဲ့လုပ်နေတဲ့ ဆိုးကျိုးသွားပါပဲဗျာ။
တစ်ချို့သော အကြောင်းအရာလေးတွေမှာခေတ်ပညာမသင်ဘူးပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ ရှေးလူကြီးတွေအတွေးကမှန်နေတတ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တော်တော်များများ… အစာစားပြီးရင် အအေးသောက်ပါတယ်။ ကိုလာလို အချိုရေသောက်တာရှိသလို သစ်သီးဖျော်ရေသောက်တာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒင်နာဆိုရင်တော့ မစားမှီနဲ့စားပြီး ၀ိုင်သောက်လေ့ရှိတယ်ပေါ့။ အမေရိကန်ဆိုတာထက် ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေ (ဥရောပ)လည်း ဒီလိုပါပဲ။
ဂျပန်တွေတော့ .. ချဝမုရှိခေါ်တဲ့ပူတင်းလေးနဲ့ ထမင်းကိုပိတ်ပြီးနောက်..ရေသောက်ကြပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံကအေးတော့ ..ရေက ရေအေးလေးပါပဲ..။
ဆိုတော့… သူတို့တွေကင်ဆာဖြစ်တဲ့နှုန်း သိသိသာသာ မြင့်လာတယ်ရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
1. Claim: Drinking cold water after meals will lead to cancer.
The information in this warning message is false. The claim that drinking cold water afterameal can cause cancer has no basis in fact. It is perfectly safe to drink cold water with or after your meals.
However, I have found no credible evidence to back up these claims. There is no mention ofaconnection between drinking cold water and cancer on the National Cancer Institute website or in other reputable cancer health resources. Nor have I discovered any news reports about suchaconnection. If the information in the message were true, it would almost certainly be well documented by both the medical establishment and the media. It isavery common practice to consume cold water or other cold beverages at mealtime.
Therefore any connections between cold water and cancer would have long since been extensively studied and reported.
Some sources do claim that cold water can slow digestion. However, even if this slowing did occur, it would certainly not fundamentally disrupt digestion in the way described in the message nor would it lead to cancer.
Thus, it is perfectly safe to drink cold water with or after your meals and this nonsensical warning should not be forwarded.
ဲပြီးတော့ အဲဒီအီးမေးလ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျကို ဆက်မဖြန့်ဖို့လည်း တချို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေက တောင်းဆိုထားပါတယ်။ သတင်းမှားနေတာမို့ ပါ။
(အဲဒါလေးတင်ပေးတဲ့သူကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော.. ။ အမှန်တရားကို ရှာခွင့် သိခွင့်ရကြတာမို့ ပေါ့)
အင်းတခါတလေမှာ လူတွေက သတင်းတစ်ခုကြားရင် မှားတယ်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်တာကနောက် … အလွယ်တကူထောက်ခံဖြစ်ကြတာများတယ်။ရွှေမန်းမေတောင် အင်းရေခဲရေမသောက်မှလို့ တွေးလိုက်မိသေးတယ်။ အမှားကြာရင်အမှန်ဖြစ်တတ်သတဲ့